အာဆင်နယ်အသင်းဟာ မြို့ခံပြိုင်ဘက် ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ တောင်ပံကစားသမား ဝီလီယံကို (၃) နှစ်စာချုပ်ဖြင့် ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဝီလီယံဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမား (၁၃) နှစ်အတွင်း ပြိုင်ပွဲစုံ ပွဲပေါင်း (၆၀၀) ကျော်ကစားထားပြီးဖြစ်သလို၊ အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသော ဝါရင့်တောင်ပံကစားသမားကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။ ဝီလီယံ ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှ ကမ်းလှမ်းခဲ့သော စာချုပ်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးနောက် အာဆင်နယ်အသင်းကို ရွှေးချယ်ကာပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ရခြင်း၏ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရင်းကို ဝီလီယံက ယခုလိုဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ “အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ကစားဟန်ကို ကျွန်တော် သဘောကျတယ်။ ဘောလုံးကွင်းအပါအဝင် အရာရာတိုင်းက အံ့သြစရာတွေကြီးပဲ။ အာဆင်နယ်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားနှင့် တကွ ဥရောပအောင်မြင်မှုတွေကို ပြန်လည်စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက် ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနေပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်လည်း ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တော်တော်လေး ပျော်နေပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ စတင်ဖို့အတွက် စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပြီ” “ကွင်းထဲမှာ ကစားခွင့်ရဖို့အတွက် မစောင့်ဆည်းနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်အသင်းသားတွေနဲ့ ဒီအသင်း ပြန်လည်တောက်ပလာဖို့ အတွက်...
Rumor : ကွင်းလယ်အင်အားအတွက် စပါးစ်အသင်းကစားသမားကို ပေါင်သန်း ၄၀ ဖြင့် အံ့အားသင့်ဖွယ်ချိန်ရွယ်လာသည့် မန်စီးတီး
မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ ကွင်းလယ်အင်အားကို ဖြည့်တင်းဖို့အတွက် စပါးစ်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဟယ်ရီဝင့်ခ်ကို ပေါင်သန်း ၄၀ ဖြင့် ခေါ်ယူဖို့ အံ့အားသင့်ဖွယ်ချိန်ရွယ်လာခဲ့ပါတယ်။ စပါးစ်အသင်းကလည်း ဝင့်ခ်ကို ယခု အပြောင်းအရွှေ့မှာထုတ်ရောင်းဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားပြီဖြစ်သည့်အတွက် စပါးစ်အသင်း၌ ဟယ်ရီဝင့်ခ်၏ အနာဂတ်မှာ လှုပ်ခတ်လျက်ရှိပါတယ်။ မော်ရင်ဟိုဟာ ဆောက်သမ်တန်ကွင်းလယ်လူ အမ်မရီဟို့ချ်ဘတ်ကို ပေါင် ၂၅ သန်းဖြင့် ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက် ကွင်းလယ်ကို အင်အားဖြည့်တင်းထားပါတယ်။ ဟိုချ်ဘတ် နှင့် ဟယ်ရီဝင့်ခ်တို့ဟာ ကစားဟန်ချင်းတူညီသည့်အပြင် ဟိုချ်ဘတ်ဟာ ဟယ်ရီဝင့်ခ်ထက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေအထားအရ ပိုပြီး ကြံ့ခိုင်သည့်အတွက် မော်ရင်ဟိုရဲ့ ကစားကွက်မှာ ပိုပြီး နေရာရလာဖို့ရှိပါတယ်။ ဟယ်ရီဝင်ခ့်ဟာ ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက နည်းပြဟောင်း ပိုချက်တီနိုလက်ထက်မှာ (၅) နှစ်စာချုပ ်သက်တမ်းတိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ The Sun ၏ ဖော်ပြချက်အရ ပတ်ဂွာဒီယိုလာဟာ ဟယ်ရီဝင့်ခ်ရဲ့ အမာခံပရိသတ်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို၊ ခေါ်ယူသွားဖို့ ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ စပါးစ်အသင်းကလည်း...
2019 ခုႏွစ္အတြက္ ဘောလုံးလောကရဲ႕ ကမ္ဘာ့လစာအကောင်းဆုံး ကစားသမား (၁၀)ဦး
ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး လီယွန်နယ်မက်ဆီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က မဟာပြိုင်ဘက်ကြီး ရော်နယ်လ်ဒိုကို ကျော်ဖြတ်ကာ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကရဲ့ အချမ်းသာဆုံး ဘောလုံးသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ France Football ဂျာနယ်မှ ဘောလုံးလောကရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့လစာအကောင်းဆုံး ကစားသမား (၁၀) ဦးကို စာရင်းပြုစု ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပင် GOAT (၂) ဦးဖြစ်သည့် မက်ဆီ နှင့် ရော်နယ်လ်ဒိုတို့က ဒီစာရင်းရဲ့ နံပတ် ၁ နှင့် ၂ ကို စိုးမိုးထားပါတယ်။ မက်ဆီဟာ ပြီးခဲ့သည့် ရာသီက စုစုပေါင်း ပေါင်သန်း ၁၂၀ အထိ ဝင်ငွေရှိခဲ့ပြီး ရော်နယ်လ်ဒိုထက် ပေါင် ၁၁ သန်းအသာဖြင့် ထိပ်ဆုံးကို ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် (၂) ဦးစလုံးရဲ့ ဝင်ငွေဟာ ပေါင်သန်း ၁၀၀အထက်ကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပေးထားတဲ့ စာရင်းကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း...
လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ သူတို့ စိုးရိမ်ရဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူတစ်နေရာအတွက် အိုလံပီယာကော့စ် နောက်ခံလူ ကိုတက်စ်ဆီမီကတ်စ်ကို ခေါ်ယူအားဖြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဝက်ဖို့ဒ်အသင်း တောင်ပံကစားသမား အစ္စမိုင်လာဆားကို ခေါ်ယူဖို့ အသည်းအသန်ချိတ်ဆက်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဆီနီဂေါလက်ရွှေးစင် အစ္စမိုင်လာဆားအနေနဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှုရနိုင်ပါ့မလား? ဒီတချက်ကိုတော့ တပ်အပ်မပြောနိုင်ပေမယ့် လီဗာပူးလ်ကတော့ အစ္စမိုင်လာဆားကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းနေတာကို သတိရစေချင်တယ်။ ဆီနီဂေါ သတင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်သည့် Sans Limites နှင့် အင်တာဗျူးရာမှာတော့ အစ္စမိုင်လာဆားက အပြောင်းအရွှေ့နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “လီဗာပူးလ်ဆိုတာ တကယ့် ထိပ်ထိပ်ကြဲ အသင်းကြီးတစ်သင်းပါ။ ကစားသမားတိုင်းက လီဗာပူးလ်လို အသင်းကြီးမှာ ကစားချင်ကြတာပဲ။ ဒီနှစ်ဆိုရင် ပရီးမီးယားလိဂ်ရတယ်ဗျာ။ မနှစ်က ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလန်မှာတော့ တခြားအသင်းကြီးတွေရှိပါသေးတယ်။ အခုထိတော့ ကျွန်တော့်ဘက်ကအပြောင်းရွှေ့နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူး။ တကယ်လို့ ထွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း အသင်းကောင်းတစ်သင်းကိုပဲ ပြောင်းမှာပဲ” “အခုလောလောဆယ်တော့ ခန့်မှန်းထားတာလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။...
အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဖွင့်ပြောခဲ့သည့် အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်လူ မီဆွတ်အိုဇေးလ်
မီဆွတ်အိုဇေးလ် နဲ့ အာဆင်နယ်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးအက်ကြောင်းတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ အိုဇေးလ်ဟာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရော၊ လတ်တလော အနေအထားအရကြည့်မယ်ဆိုရင် လစာအများဆုံး ခံစားခွင့်ရရှိထားပါတယ်။ လစာအများဆုံးရထားသည်ဆိုသော်လည်း အာတီတာရဲ့ ကစားကွက်မှာ လိုက်ပါစည်းမျောနိုင်စွမ်းမရှိသည့် အတွက်အပယ်ခံထားရပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ကစားသမားသစ်တွေ ထပ်မံခေါ်ယူချင်သော်လည်း ငွေကြေးအကျပ်အတည်း ကပ်ဆိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် တွန့်ဆုတ်နေရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသင်းမှာရှိတဲ့ ကစားသမားတွေကို ရောင်းထုတ်ပြီး ကစားသမားသစ်တွေနဲ့ ရာသီသစ်ကို ပြန်စဖို့ အာဆင်နယ်တာဝန်ရှိသူတွေက ဆုံးဖြတ်ထားပုံရပါတယ်။ လစာအများဆုံးရတဲ့ အိုဇေးလ်ကို အာဆင်နယ်အသင်းက ရောင်းထုတ်ချင်ပါတယ်။ စာချုပ်သက်တမ်း ၁၂ လလောက်ပဲကျန်တော့တာဖြစ်ပေမယ့်လည်း အသင်းက အိုဇေးလ်ကို တပတ်ပေါင် ၃ သိန်းခွဲ မပေးချင်တော့ပါဘူး။ ဒီအတွက်ကြောင့် စာချုပ်လျော်ကြေးပေးပြီး စာချုပ်ဖျက်သိမ်းမယ်လို့ အသံတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အိုဇေးလ် အေးဂျင့်ဖြစ်သူက အိုဇေးလ်ဟာ အာဆင်နယ်နှင့်စာချုပ်သက်တမ်း ကျန်သေးသည့်အတွက်ကြောင့် မည်သည့်အသင်းကို မှ ပြောင်းမှ မဟုတ်သလို၊ သက်တမ်းပြည့်သည်အထိ...